အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇွန်လ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇွန်လ ၂၀၁၅	11
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇွန်လ ၂၀၁၅
Posted by kai on May 13, 2015 in Editor's Notes | 11 comments
၆ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုကို ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့ကနေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ၆ပွင့်ဟူသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ လွှတ်တော်ဥက္က္ကဋ္ဌ နှစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ဦးရွှေမန်း၊ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်တို့အားခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၆ပွင့်ထဲတွင် ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အမေရိကပြည်သို့ တခေါက်စီရောက်ဖူးကြကာ ဦးရွှေမန်းသည်သာ ယခုလဆန်းပိုင်းက အမေရိကအောက်လွှတ်တော်ဥက္က္ကဋ္ဌ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ၂ခေါက်မြောက်ရောက်ဖူးလေသည်။ စိန့်ပြည်(China)မှအပြန်တွင်အမေရိကပြည်သို့ဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
လွန်ခဲ့သောရာစု၂ခုခန့်ကတည်းက နပိုလီယန်မှ အရှေ့ဖက်ဆီကနဂါးကြီးကိုသွားမနှိုးမိပါစေရန်သတိပေးခဲ့ဖူးသည်။ နိုးလာလျှင် ကမ္ဘာကိုင်လှုပ်ခံရလိမ့်မည်ဟူသတတ်။
စိန့်ပြည်(၀ါ)ဂန္ဓလရာဇ်တိုင်းသည်လူ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်၃ထောင်ကျော်ခရီးဖြတ်ခဲ့သည့် စက္ကူနှင့်ယမ်းထီထွင်ထားနိုင်ခဲ့သောနိုင်ငံကြီးဖြစ်၍ ၂၁ရာစုတွင်မူ ကမ္ဘာ့ထွက့်ကုန်အများဆုံးထုတ်ပေးနေသည့်စက်ရုံကြီးဖြစ်နေကာ အမေရိကပြည်ထောင်စု၏ အကြီးဆုံး မြီရှင်(ဒေါ်လာ ၁.၃ ထရီလီယံ)လည်းဖြစ်၏။
စိန့်ပြည်နှင့် ကုလားပြည်(အိန္ဒိယ)တို့၏ အာရှသည် ကမ္ဘာ့လူသားတို့၏အတွေးအခေါ်၊ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို နှစ်ထောင်ချီလွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ဖူးသည်။
စိန့်ပြည်၏အကူအထောက်ဖြင့် မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်(ဗကပ)တို့ သူပုန်ထဖူး တော်လှန်ခဲ့ကြဖူးသည်။
တရုတ်ဖြူ(ယခုထိုင်ဝမ်)တို့နှင့်တရုတ်နီ(ယခုကွန်မြုနစ်စိန့်ပြည်) တို့သည် မြန်မာ့မြေတွင် ခြေခင်းက စစ်ဖြစ် ကျူးကျော်ခဲ့ဖူးကြသည်။
စိန့်ပြည်အစိုးရနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်တို့ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်လုပ်ကြကာ အနောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတို့အားဆန့်ကျင်ရပ်တည်ခဲ့ဖူးသည်။
လူဦးရေ သန်း ၁၃၅၇(၂၀၁၃) တွင် ဂျီဒီပီ ဒေါ်လာ ၉.၂၄ ထရီလီယံ ကြွယ်ဝမှု ရှိသော ကမ္ဘာ့ဒုတိယပြည်ကြီးပေတည်း။
လွန်ခဲ့သောနှစ် ၂ထောင်ကျော်ကရောမအင်ပါယာကို ကြားဖူးသိဖူးပါလ်ိမ့်မည်။ ရုပ်ရှင်၊ ပုံပြင်၊သူရဲကောင်းဒဏ္ဍာရီတို့တွင် ရင်းနှီးလှသည်မဟုတ်ပါလော။
ရောမသားတို့မည်မျှပါဝါစွမ်းအား သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားခဲ့သည်ဖြစ်စေ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လေသောအခါ ရောမ၏အီတလီသည်လည်း နာဇီဂျာမဏီအောက်ပြားဝပ်ခတွားလိုက်ရသည်။
ထိုဂျာမန်တို့ကိုပင် အင်္ဂလိပ်ဦးဆောင်သော မဟာမိတ်တပ်တို့က စစ်နိုင်လိုက်ကာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးသည် အမေရိကပြည်ကို စူပါပါဝါ ကမ္ဘာ့ပထမပြည်ဘ၀သို့ရောက်ခဲ့စေသည်။
ဤကမ္ဘာမြေ၀ယ် လူဖြူတို့ လွှမ်းမိုးမြင့်တက်မှုသည်နှစ် ၂၀၀ကျော်လေပြီ။ ထိမ်းထားနိုင်ဦးမည့်ပြယုဂ်တို့မြင်ရဆဲတည်း၊ အမေရိကပြည်သည် လူဖြူတို့၏ လက်ရုံး/နှလုံးရည်ပြ အကောင်းဆုံးဖန်ဆင်းမှုကြီးပင်။
လူဦးရေ သန်း ၃၂၀(၂၀၁၄) တွင် ဂျီဒီပီ ဒေါ်လာ ၁၇.၄၂ ထရီလီယံ ကုန်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသတည်း။
မကြာမတင် နောင်၁၀နှစ်ကျော်ကာလ၀ယ် အာစီယံ၁၀နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့စက်ရုံကြီးနေရာလွှဲယူမည်ဆိုကြသည်။ လုပ်အားဈေးပေါသည်။ အလုပ်ပြင်းထန်စွာလုပ်သည်။ သယံဇာတရှိသည်။ လူဦးရေတောင့်သည်။ ကုန်းရေလေလမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းသည်။
လူဦးရေပေါင်းသန်း ၆၂၅(၂၀၁၃) တွင် ဂျီဒီပီ ဒေါ်လာ ၃.၆ထရီလီယံ ကုန်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိနေ၏။ မြန်မာပြည်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူဦးရေထုရှိသည့် ကုလားပြည်နှင့် စိန့်ပြည်ကြားခွလျှက်မှ အာစီယံထဲခွေနေပေရာ ဒေသန္တရတွင် စီးပွားရေး၊စစ်ရေးတို့၌ မဟာဗျူဟာကျကျ မည်မျှအရေးပါနေမည်ကို သိသာပါသည်။ မျက်စိစပါးမွှေးကား စူးပင်စူးလောက်စူးငြားတည်း။
ထိုပြည်အခင်းတွင် ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါကြီးတို့အားပြိုင်လွန်ဆွဲလာလျှင် မည်သို့ဖြစ်အံ့နည်း။
မြန်မာပြည်သည် အင်အားကြီး စူပါပါဝါများနှင့် ယှဉ်ဖက်မဟုတ်ပေ။
စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူဦးရေ မည်သည့်ဖက်မှ အင်အားသာလွန်ခြင်းမရှိ။
ပုဂံပြည်ကျ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ပျက်ခဲ့သည်မှာ စိန့်တိုင်းသားတို့လက်ချက်မဟုတ်မူ၍ စိန့်ပြည်သည်လည်း မွန်ဂိုတရုတ်တို့လက်အောက် မြန်မာပြည်နှင့်ဘ၀တူ ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် မြန်မာ့အင်ပါယာကျယ်ပြန့်ကြီးမားခဲ့သည်ကို သမိုင်းပြန်လှန်ကာ ရွှေထီးဆောင်းချိန်လှမ်းမျှော်ကျယ်နေ၍မဖြစ်နိုင်။
သုိ့သော် မြန်မာတို့သည် အမေရိကန်တို့ကိုခေါ်သွင်းထိမ်းညှိပေးနိုင်သည် နေရာအခြေအနေတွင်ရှိနေပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့်သူ၏အစိုးရသည် စိန့်ပြည်ဖက်ယိမ်းပေးမည်ဆိုလျှင် ဒီချုပ်ပါတီသည် အနောက်နိုင်ငံများဖက်တိမ်း၍ထိမ်းပေးသည် ဖြစ်ရမည်။
ထိုစူပါပါဝါများကြားတွင် လွန်စွာလိမ်မာပါးနပ်စွာကစား နိုင်လောက်သည့်နေရာတွင်ရှိပါ၏။
စိန့်ပြည်၏ခြေဆင်းထွက်ပေါက်နိုင်ငံများသို့ အမေရိကန်အ၀င်ကြမ်းလျှင် တိုင်းပြည်၂ခြမ်းပြတ်တတ်ပါ၏။ ယခုပင်လျှင် စိန့်ပြည်မှ မြန်မာပြည်ကို ခါးလည်ဖြတ်၍ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းဖေါက်ခဲ့ပြီးလေပြီ။ အမေရိကန်တို့အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘာပေးနိုင်မည်နည်း..။
“၀”သည် အမြဲတမ်းစစ်သည်အင်အား၃သောင်းကျော်ဖြင့် မြန်မာပြည်ထောင်စုတွင်း၌ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတခုဖြစ်သည်။ ၀တို့သည် မြန်မာဘုရင်မင်းဆက်အားအခွန်ပဏ္ဍာဆက်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြပါ၏။
“ကိုးကန့်”သည်လည်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြ၍ တရုတ်စာ၊စကား ရေးပြောသုံးကြသည်။ ယခု”လောက်ကိုင်”ဒေသတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်တိုက်ပွဲကြီးများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရလေသည်။ ၁၉၈၉တွင် ဗကပမှခွဲထွက်ကာ တပ်တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်၍ စစ်သည်အင်အား ၂ထောင်မျှရှိသည်။
ခရစ်ယန်အများစုနေထိုင်သော “ကချင်”ပြည်နယ်သည် ဦးနု၏ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံထုထောင်ခြင်းဂယက်ကြောင့် တော်လှန်ရေးစခဲ့ကြသော မြောက်ဖက်ပြည်နယ်ဖြစ်ကာ သယံဇာတကြွယ်လှသောမြေတွင်ထိုင်သည်။
“ရှမ်း”သည် မြန်မာပြည်၏အရှေ့ဖက်ခြမ်းတခုလုံးထိအောင်ကျယ်ပြန့်သော မြေနေရာဒေသပိုင်ရှင်ဖြစ်ကာ ဒေါ်လာငွေမည်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည့်ကမ္ဘာကျော် ရွှေတြိဂံဒေသလည်း ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းပါဝင်သည်။ စိန့်ပြည်မှ မြန်မာပြည်သို့ ထိပ်တိုက်ထိတွေခြင်းလျှော့ကျသွားအောင်ရှိနေသော ကြားချခံနယ်(buffer zone)များဖြစ်ပါ၏။
အဆိုပါတိုင်းရင်းသားဒေသတို့သည် စိန့်ပြည်နှင့်နယ်နမိတ်ထိစပ်နေကြကာ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် စစ်ရေးအရထိတွေ့နေသူ၊ ထိတွေ့ဖူးသုများလည်းဖြစ်ကြသည်။
ပြည့်အင်အားသယံဇာတတို့ကိုရောင်းရငွေဖြင့် စိန့်ပြည်ထွက်လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်က ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းချနေကြခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်မည်သည့်ပါတီနိုင်မည်ကို သိသာထင်ရှားမြင်နေရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါလျှင် သမ္မတမည်သူဖြစ်မည်ကိုပင်မှန်းကြည့်၍ရသည်။
သို့နှင့် သမိုင်းဘီးလှည့်ကြည့်ကာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိချင်စရာတည်း။
ဒီချုပ်တို့ လွှတ်တော် ၄၉၂ခုံဝယ် ၃၉၂ခုံမဲနိုင်ရခဲ့သောအခါ မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သနည်း။
ရွေးကောက်ခံအမတ်မင်းများ အချုပ်အနှောင်ခံရ။ ပြည်ပြေး၊ သူပုန်ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးသည်။ မအ,အောင်သင်ခန်းစာယူပါလေ။
မိမိ၏ခံစားချက်ဦးစားပေး မဲရွေးရန်မဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်းကိုလည်းမျှော်ကြည့်သင့်သည်။
တိုင်းသူပြည်သားအဦးစီတိုင်း တိုင်းပြည်အနာဂတ်ပုံပြောင်းသွားနိုင်သော မဲပြားတို့နှင့် မိမိနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကို မူတည်ကစားကြပါလေ။ အဖနိုင်ငံတော်သည် သမိုင်း နှစ် ၁၀၀၀ကျော်ကြာခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာအလယ်မွဲပြာလျှက်သာ နေပါသေးသည်။ ဆင်းရဲလွန်းလျှက်မှ ခွဲခြားပြလွန်းပါလျှင် ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်လိုသည့်တိုင်းရင်းသားများကို မြင်ကြရလ်ိမ့်..။
တိုင်းပြည်နုနုသည် အသပ်ခံများနွမ်းလျှလှပါပြီ။ နိုင်ငံရေးသမားတို့လည်း တိုင်းပြည်အကျိုးထက် ပကာသနနှင့် အာဏာစွမ်းပြဖို့ လုံ့လမထုတ်ကြပါလင့်။ ရွေးကောက်ပွဲဟူသည် စစ်လွှမ်းမိုးမှုကို တဆင့်စီလျှော့ချနိုင်သည်ဟု သိကြပါ။
အိမ်နီးချင်းကိုချစ်ကြည်ပါ။ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းတို့ကိုသာ ယူဆောင်ပါ။ ရင်းထားခဲ့ရပြီးသော အကျိုးစီးပွားတို့ကို မဖျက်ပစ်ပါလင့်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံများနှင့်မိတ်ဖက်ပါ (၀ါ) သူဌေးနှင့်ပေါင်းပါ။
ပဲဟင်းစားချင်သည်ဆိုလျှင်တော့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးကားနှုတ်ခံဝံ့ရလိမ့်၊ ၀မ်းနိုင်ရလိမ့်ဟု မေတ္တာစကားဆိုချင်ပါသတည်း။ ။
မင်းမှာ လုပ်ချင်၏။ တင်းကုပ်မှာ အချုပ်ခံဝံ့ မခံဝံ့။
ပဲဟင်းကို ရှုပ်ချင်၏။ နှုတ်ခမ်းမွှေးကို အနုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ့။
မှိုနှင့်မျှစ်ကို နုတ်ချင်၏။ ကျဉ်တုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ့။
ခင်ဇော် says: ဥရွှေမန်းးကတော့
တော်ရုံ အကုသိုလ်နဲ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ မဖြစ်ဘူးးဆိုလားး ဘာ လားးး
kai says: ဒီလပိုင်းပင်စင်အသက်တမ်း.. ၆၀ကိုတိုးကြည့်မယ့်… ဥပဒေပြုဖို့ကြိုးစားတာတချို့တွေ့ရတယ်…။
ဒါက.. အခုအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေထဲ… အစိမ်းဂိုဏ်းသားတွေ.. ရာထူးဆက်ကုပ်ထားချင်တဲ့သဘောဆန္ဒထင်ဟတ်တာလို့.. ထင်မိ…။
.. သဘာဝတရားကပေးလာတဲ့.. ဇရာကိုတောင်.. လှန်ချင်တဲ့သဘော..။
ဒီလူတွေကို..ဗျူရိုကရက်တွေကို.. ဘယ်လိုဖယ်ပစ်ရမလဲ… စဉ်းစားနေသူသင့်တန့်တွေများရှိရင်.. သိစေချင်တဲ့သဘောနဲ့.. ဒီလအယ်ဒီတာ့အာဘော်ရေးတာပါ..။
သက်၆၀တန်းဖြုတ်ချနိုင်ရင်.. ဒီချုပ်မှာလည်း.. တော်တော်ပါသွားမယ်လေ…။
ဒီချုပ်ပါတီအားနည်းချက်က… ဒုတိယဂျန်နရေးရှင်း သေသေချာချာလေ့ကျင့်မမွေးထား(သေး)တာပဲ..။
အခုတင်.. အစိုးရ၀န်ထမ်းကအနားယူ(မယ့်/ထား)သူတွေ.. သူတို့အမတ်အဖြစ်ပါဝင်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းခေါ်နေပြီ..။
Ma Ma says: မအ,အောင်သင်ခန်းစာယူပါလေ။
kai says: ၁၉၉၀ မှာဒီချုပ်က… မဲပြတ်နိုင်တော့.. ဟေ့.. အာဏာလွှဲမပေးဘူးကွ…
လွှဲပါမယ်ကတိပေးခဲ့တဲ့.. ဘိုချုပ်မှုးကြီးစောမောင်တောင်.. ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေလို့ပါဆိုပြီး.. ဆွဲချဖြုတ်လိုက်တာ…။
Mike says: .တိုက်ဆိုင်တယ်ပြောရမယ်ဗျ..ဒီနေ့ပဲ ကိုကြီးမိုင်း စတေးတတ်မှာ မောင်သာရ၀တ္ထုအကြောင်းလေး
တစ်နေ့က မောင်သာရ၏ ကျဉ်တုပ်ခံဝံ့၊ မခံဝံ့ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ဖတ်မိသည်။
၁၉၅၃၊ ဖဆပလဦးနုအစိုးရလက်ထက်သမဂ္ဂကျောင်းသားများလှုပ်ရှားမှု၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် အလုပ်သမားညီညွှတ်ရေးပါတီတို့၏ လှုပ်ရှားများကိုအခြေခံပြီးရေးသားထားသည်။
ဦးနုအစိုးရ၏ ကျောင်းသားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ပုံကိုလည်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရေးပြထားသည်။ ယခုခေတ်ကျောင်းသားထဲတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီအမာခံများရှိသကဲ့သို့ ထိုခေတ်ကကျောင်းသားထဲတွင်လည်း ဖဆပလပါတီဝင်ကျောင်းသားများရှိသည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဖဆပလပါတီဝင်ကျောင်းသားများအနိုင်ရဖို့ အစိုးရက အစစ၊ အရာရာကူညီသဖြင့်ထိုကျောင်းသားများငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေကြသည်။
တခြား ဗကသကျောင်းသားများနှင့် တခြားကလပ်စည်းပါတီဝင်ကျောင်းသားများကား အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်။
ကျောင်းကဲန်တင်းတွင် ဖဆပလအစိုးရ၏ထောက်ပံ့မှုကိုရထားသော ပါတီဝင်ကျောင်းသားများကိုတွေ့ပါက တခြားပါတီဝင်ကျောင်းသားများက လက်ဘက်ရည်တိုက်ခိုင်းသည်၊ မုန့်ကျွေးခိုင်းသည်။ သူတို့ပြုစုသောမုန့်နှင့်လက်ဘက်ရည်ကို ခေါင်းမဖော်တမ်းစားရင်း “မောင်ရင်တို့အခုလိုကျွေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သမဂ္ဂရွေးကောက်ပွဲကျရင်တော့ ကိုယ်တို့ပါတီနိုင်အောင်လုပ်ရမှာပဲ” ဟုခနဲ့တဲ့တဲ့ပြောသည်။
ဖဆပလပါတီဝင်ကျောင်းသားများကလည်းစိတ်မဆိုး၊ ရယ်ကြဲကြဲဖြင့် “စွမ်းရင်လုပ်ကြပေါ့မောင်ရာ” ဟုပြန်ပြောသည်။
အမြင်မတူဒို့ရန်သူဟူသည့်သဘောကိုမတွေ့ရ။ စိတ်သဘောထားများက ကြီးမြင့်ကြသည်။ အမြင်မတူပါက သမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွင် ချက်ချင်းထပြောသည်။ ဝေဖန်သည်။ တဖက်သူက ဝေဖန်ချက်ကို မခြေဖျက်နိုင်လျှင် အဆိုကိုရုတ်သိမ်းပေးရသည်။ အစည်းအဝေးပြီးလျှင် လည်ပင်းဖက်ပြီးလက်ဘက်ရည်ဆိုင်သွားကြသည်။
တကယ့်လူကြီးလူကောင်းများ၏ အမူအကျင့်များကို တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂက မွေးဖွားပေးသည်။ အသက် ၂၀ ကျော်မျှနှင့် ပါတီ၏၀ါဒများကိုနောကြေနေသည်။ နေ့တွင်ကျောင်းတက်၍ ညဘက်တွင် ပါတီကေဒါလျိှု့ဝှက်သင်တန်းများတက်ကြရသည်။
တစ်နေ့တည်းတွင်နှစ်ကျောင်းတပြိုင်နက်တက်ပြီး အဆင်းရဲခံကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမှန်သမျှ နိုင်ငံရေးနိုးကြားပြီးသားဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းမှလည်း အာဏာရှင်တို့၏ လုပ်ရပ်များကို အစဉ်ဆန့်ကျင်ရေးသားသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုက ကျောင်းသားကိုလွန်စွာအားကိုးသည်။ ချစ်ခင်သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း အာဏာရှင်များက ကျောင်းသားများကို ရွံ့ကြောက်ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦမရှိစေလို။ သူတို့၏အနိုင်ကျင့်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကိုဆန့်ကျင်မည့် သေနင်္ဂဗျူဟာများထွက်ရှိရာထိုအဆောက်အဦကို နေ၀င်းအစိုးရကဗုံးခွဲလိုက်သည်။ သန်းရွှေအစိုးရက ပညာရေးကိုဖျက်ဆီးသည်။
ထိုအခါကျောင်းသားထုကြီးဗရမ်းဗတာဖြင့်ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ ယနေ့ခေတ်အထိကျောင်းသားများကို မိဘပြည်သူများ ချစ်ခင်ကြသည်မှာ ရှေးကျောင်းသားကြီးများ၏ ရင့်ကျက်မှု၊ အသိဥာဏ်ကြွယ်ဝမှုနှင့် နိုင်ငံရေးခံယူချက်ပြည့်ဝမှုတို့၏ အရှိန်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဦးဆောင်၍ တကသနှင့် သမဂ္ဂများဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုနေခြင်းသည် အတိတ်၏ကောင်းမြတ်သောအစဉ်အလာများကို အသက်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားနှင့်ပြည်သူတသားတည်းပူပေါင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ထိုလူငယ်များသည် ရှေးခေတ်ကျောင်းသားကြီးများကဲ့သို့ရင့်ကျက်ကောင်းမှရင့်ကျက်ပေလိမ့်မည်။ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မှန်ကန်ချင်မှ မှန်ကန်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ပြည်သူနှင့်ကျောင်းသားထုတစ်ခုလုံးအတွက် နေပူထဲထွက်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။
ထိုသူငယ်လေးများပြောမှားဆိုမှားရှိခဲ့ရုံမျှနှင့်တော့ ထိုကျောင်းသားတို့၏ကြွေးကြော်တောင်းဆိုသံကို ပြက်ရယ်ပြုခြင်းငှာမသင့်တော်ပါ။ ထိုကျောင်းသားများ စာမကျက်ချင်သောကြောင့်လမ်းပေါ်ထွက်လာသည်မဟုတ်။
အာဏာရှင်ကိုအစဉ်တစိုက်တော်လှန်ခဲ့ကြသော မည်သည့်ပါတီဝင်မဆို၊ ကျောင်းသားမဆို၊ ဘယ်ပြည်သူမဆို တစ်လှေတည်းစီး၊ တစ်ခရီးတည်းသွားသူများဖြစ်သည်။
မင်းမှာလုပ်ချင်သည်၊ တင်းကုပ်မှာ အချုပ်ခံ့ဝံ့၊ မခံဝံ့။
ပဲဟင်းကို ရှုပ်ချင်သည်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးကို အနှုတ်ခံဝံ့၊ မခံဝံ့။
မှိုနှင့်မျှစ်ကိုနှုတ်ချင်သည်၊ ကျဉ်တုပ်ခံ့ဝံ့၊ မခံဝံ့။ (ကျည်းကန်ရှင်ကြီးမေတ္တာစာ)
တင်းကုပ်မှာ အချုပ်ခံ့ဝံ့သည့် တော်လှန်ရေးသမားဟူသမျှ ကျဉ်တုပ်ခံရမည်ကို မမှုပါ။
(ရှေးခေတ်ကျောင်းသားများ၏လှုပ်ရှားမှုသဘော၊ အာဏာရှင်များကကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုအဘယ့်ကြောင့်မရှိစေချင်သနည်း၊ အဘယ်ကြောင့်ယနေ့ခေတ်ကျောင်းသားများက သမဂ္ဂဖွဲ့ခွင့်တောင်းဆိုရသနည်း၊ ထိုအချက်မျာကို သဘောပေါက်ရန်အကျဉ်းချုံးတင်ပြထားပါသည်။)
kai says: ဆရာမောင်သာရ ဆေးရုံတက်ရတယ်ဆိုတော့… သူ့သတိရ.. သူ့စာတွေခေါင်းထဲရောက်လာတတ်တာ သဘာဝပါ..။
ကြည့်ရတာ… ဆရာမှိုင်းလည်း.. အဲလိုဖြစ်တယ်ထင်ပါ့…။
ကျုပ်အဖေကတော့ အဲဒီခေတ်သမဂ္ဂထဲပါဖူးသမို့… ကျောင်းသားတွေထဲ.. တပ်ဦးတို့.. ရဲခေါင်တို့ပြောသံတော့ကြားဖူးရဲ့..။
Alinsett @ Maung Thura says: စိန့်ပြည်(၀ါ)ဂန္ဓလရာဇ်တိုင်းသည်လူ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်၃ထောင်ကျော်ခရီးဖြတ်ခဲ့သည့် စက္ကူနှင့်ယမ်းထီထွင်ထား..ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ကို ပြန်ကြည့်ပြီး… တီထွင်လို့…ပြောင်း ပုံနှိပ်သင့်ပါသလေ… ———
တရုတ်ဖြူ(ယခုထိုင်ဝမ်)တို့နှင့်တရုတ်နီ(ယခုကွန်မြုနစ်စိန့်ပြည်) တို့သည် မြန်မာ့မြေတွင် ခြေခင်းက စစ်ဖြစ် ကျူးကျော်ခဲ့ဖူးကြသည်။ ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ကိုလည်း ပြန်ကြည့်ပါအုန်းခီညှ…
.ခြေခင်းက လား..ခြေခင်းကာလား… ———
ဆိုတော့…. ၁၉၉၀ တုန်းကလို မဖြစ်ဖို့….
.ဖြစ်မှာတွေကတော့ ဖြစ်ကို ဖြစ်အုန်းမယ့်ပုံ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ကျေးကျေးပါနော..။
အဲဒီ တီထွင်ရယ်… ကျန်းမာရေးရယ်… ပြင်ရအရမ်းခက်..
၁၉၉၀ တုန်းကလို မဖြစ်ဖို့….
အဲဒီအတွက် အာမခံပေးရမယ်လို့… ထင်..။
ဦးဦးပါလေရာ says: .ဒီလို တယောက်တစ်ပေါက် လူမျိုးတွေ စု ပြီး ပြည်ထောင်စုလုပ်ချင်ရင် နည်း ၂ နည်းရှိတယ်
.မျိုးချစ်စိတ်တို့ နိုင်ငံချစ်စိတ်တို့ သမိုင်းကြောင်းတို့ နဲ့ မစည်းနှောင်ပဲ
.အကျိုးစီးပွား … နဲ့ စည်းနှောင်မှ ရမယ် မြဲမယ်…
.တကယ် အာဏာတည်တဲ့ (ဥပမာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလောက် သို့မဟုတ် ဦးနေ၀င်းရဲ့ ဆယ်ဆလောက် )
.ခေါင်းဆောင်သစ်တစ်ဦး မတော်တဆ ရ လာခဲ့ရင်
.လူမျိုးကို အခြေမခံပဲ ပထ၀ီ အနေအထားကို အခြေခံတဲ့ ပြည်နယ် သုံးဆယ်လောက်နဲ့ ပြန်ဖွဲ့စည်း
.ဒေသန္တရ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ များများပေးထားလိုက်
.ပထမနည်းအတွက်ဆိုရင် အဲလိုလုပ်ဖို့ ဥာဏ်မီဖို့လဲလိုတယ် အတ္တမကြီးဖို့လဲ လိုတယ် အစွဲမကြီးဖို့လဲလိုတယ်
.ဒုတိယနည်းအတွက်ဆိုရင်တော့ ဟစ်တလာလောက်နီးပါး အာဏာရှင်တစ်ယောက်လိုတယ်..
မြစပဲရိုး says: Northland Events CentreWhangarei (NZL)30 May 2015 – 16:00 Local time
Group matches – Group A
U20 မှာ မြန်မာ ရှုံးသွားပြီ။ USA2– Myanmar 1
USA ကို အားပေးလို့ တဲ့။ FB မှာ သူငယ်ချင်း ချင်း Unfriend လုပ်သူတွေလဲ ရှိ။
Sports မှာ ကိုယ်ကြိုက်ရာ အားပေးခွင့်ရှိတာကို။
The Best man wins ပေါ့။
အဲဒါကို ဒါအမျိုးချစ်စိတ် လို့ ဝိုင်းအားပေးကြတယ်။
ဒါက အမျိုးချစ်စိတ် နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလေကွယ်။ တစ်ဂိုး တော့ ပွဲဦးထွက် သွင်းနိုင်သားဘဲ။ မင်းမဆိုးပါဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: အမေရိကနိုင်ငံကို.. အမိနိုင်ငံတော်လို့ခေါ်ချင်ပြီး.. မြန်မာပြည်ကိုတော့.. အဖနိုင်ငံတော်လို့..။
တကယ်တော့.. အမေရိကနေ.. အမေရိကန်တွေမှာ.. ခေါင်းစဉ်ခွဲခြားရှိပါတယ်..။
မြန်မာက… ရှေ့က… တရားဝင်ကိုတပ်ထားခွင့်ရှိတယ်..။
မျိုးဆက် ၃ခုလောက်အထိ.. အဲလိုတပ်လေ့ရှိကြတယ်..။
အဲဒါ.. မြန်မာမှမဟုတ်… လူမျိုးတိုင်း…။